Ungayifumana njani i-imeyile yangaphandle esuka kwi-Gmail usebenzisa i-POP3-Geofumadas
Internet kunye neBlogs
Indlela yokufikelela kwi-imeyili yangaphandle esuka kwi-Gmail usebenzisa i-POP3
NgoJanuwari, 2012 Internet kunye neBlogs
Kule nqaku siza kubona indlela yokuqwalasela i-POP Gmail. Kulabo bahamba kakhulu okanye abafuna ukufikelela kwi-imeyile kwiikhompyuter ezahlukeneyo, ukusebenzisa umxhasi weMicrosoft Outlook kunzima; Nangona ngeenjongo zeziko kuphantse kungenakuthinteleka, emva kokwazi i-Gmail kuvakala ngathi ngumqolomba ukusebenzisa i-Outlook eye yenze inkqubela phambili encinci malunga nokukhangela kunye nokusebenza kwe-backup kwilifu.
Ngeli xesha ndifuna ukubonisa ukuba ungayisebenzisa njani i-Gmail ukufikelela kwiakhawunti ye-imeyile yangaphandle, siya kusebenzisa iWebmail njengomzekelo, yenye yezona zinto zixhaphakileyo ezinikezelwa ziinkonzo zokubamba. Ukuqala kwam ukuyenza bendididekile kwaye ndingazi ukuba ndiyenze njani, okwesibini oko kwandibiza phantse ngokufunda ngokufanayo, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyise kwinqaku elindikhumbuza okwesithathu kwaye ngeso sihlandlo khonza abanye.
I-akhawunti ye-imeyile info@mydomain.com
Oku, kwimeko yeCpanel, ayithathi ixesha elide kunokuba uchaze igama, igama lephasiwedi kunye ne-quota yokugcina.
Ukufikelela kule akhawunti eyenziwe, akudingeki ukuba ube neCpanel, kodwa nge-adresi
Apha ungakhetha ukhetho ekungeneni, apho ungabona ukucwangciswa kwamaseva kunye namachwephelo eposi engenayo nephumayo.
Kukho neendlela ezimfutshane zokumisela ifayile yelog ye-Outlook. Kwimeko yokusebenzisa enye i-imeyile engekho kwiWbmail, kuhlala kukho ikhonkco apho esibonisa le datha yoqwalaselo. Nangona i-POP3 iyinkqubo nje, iWebmail ixhasa i-POP3S (SSL / TLS), IMAP, IMAPS (SSL / TLS) njenge-imeyile engenayo kunye ne-SMTP, i-SMTPS (SSL / TLS) njenge-imeyile ephumayo.
Cela ukufikelela kwi-Gmail
Xa i-akhawunti idalwe, ku inbox Sicela ukunika ukufikelela kule akhawunti:
Useto> iiAkhawunti kunye nokungenisa> Faka iakhawunti ye-imeyile ye-POP3
Kwiphaneli elandelayo songeza idilesi esithandayo, kweli phepha info@mydomain.com
Oku kubangela ukuba inkqubo ithumele isaziso kule imeyile, ukugunyazisa ukufikelela kwangaphandle. Emva koko kufuneka ufake isitshixo esithunyelwe ngeposi ukuqinisekisa ipropathi.
Misa iposi ye-imeyile ye-gmail
Nangona kukho ukhetho olulula olwenziwe ngeGmail, into engalunganga kukuba iya kuhlala ibonisa ukuba ithunyelwe ngeGmail. Kungoko isidingo sokwenza ngale ndlela.
Kwiphaneli ebonakalayo, kufuneka sifake idatha:
Iseva yeposi engenayo: imeyile.mydomain.com
Iseva yeposi ephumayo: imeyile.mydomain.com
110 port, akufanele ukunika iingxaki.
Kufuneka kwakhona ukhankanye nokuba ufuna ukuba ugcine ikopi webmail (recommended) kwaye uleyibhelishe indlela ezi imeyili bafika e-Gmail.
Ngale ndlela, sinokuthumela nokufumana kule akhawunti, usebenzisa i-Gmail.
Office for ebulalayo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba ze-2 kwingingqi ye-geospatial ongenakuyihoya
Post Next IGeofumadas, unyaka omnye kwiiNethiwekhi zeNtlaloOkulandelayo »
Phendula "Indlela yokufikelela i-imeyile yangaphandle esuka kwi-Gmail usebenzisa i-POP3"
Ijaji Yakho Yelanga uthi:
Ngokulula njengokubona ingcali ikhulisa ikhaya - kuchazwe inyathelo ngenyathelo Funda ukuVuselelwa kweDeski ngendlela elula ....
#BIM-Ikhosi yoYilo yoLwakhiwo isebenzisa iSakhiwo seRobhothi ye-AutoDesk
I-OpenStreetMap: Enye yezona projekthi zinkulu zokusebenzisana kwihlabathi
Abona bamkeli beGPS abagcinwe ngesandla